सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई कोरोना संक्रमण – bampijhyala.com
Home > मनोरञ्जन > सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई कोरोना संक्रमण
सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई कोरोना संक्रमण
२० बैशाख २०७८, सोमबार १०:२२ bampijhyala
२० बैशाख, बाँपीझ्याला, एजेन्सी । साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुपरस्टार अल्लु अर्जुन आफैले सोसल मिडिया ट्वीटरमार्फत् आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन् । अहिले उनी होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । उनलाई केही दिन अगाडिसम्म आफ्नो सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्णलाई कोरोना टेष्ट गराउनका लागि आग्रह पनि गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘मलाई कोरोना पोजेटिभ भएको छ । मैले आफूलाई आइसोलेट गरेको छु । म सँग सम्पर्कमा रहनुभएका सबैले कोरोना टेष्ट गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’
त्यस्तै, उनले आफू ठीक रहेको बताउँदै आफ्नो विसर्स तथा फ्यानहरुलाई चिन्ता नगर्न आग्रह पनि गरेका छन् । उनले सबैलाई घरमै बस्न र सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै अवसर पाएमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन अपील पनि गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे समीक्षा हुँदैं
भीमेश्वर नगरपालीका २ राम्पा दोलखामा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २० बैशाख २०७८, सोमबार १०:२२
सम्झनामा जेठ ३ २० बैशाख २०७८, सोमबार १०:२२
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २० बैशाख २०७८, सोमबार १०:२२
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २० बैशाख २०७८, सोमबार १०:२२
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २० बैशाख २०७८, सोमबार १०:२२